Umthengisi weeNgcaciso eziPhakamileyo zePvc ye-PVC ye-Cable Trunking Qiangsheng
Intambo ye-PVC ye-trunking extrusion line isetyenziselwa ukwenza iprofayili encinci ye-PVC njengeprofayili ye-PVC Skirting, iprofayili yekona eludongeni, iprofayile ye-PVC yentambo yokuqhekeka enobume obahlukeneyo kunye nokuphakama. umphezulu weprofayile ye-PVC / iphaneli inokunyangwa ngokuprinta kunye nokutyabeka ngeoyile ecwebezelayo, okanye ngokuprinta ubushushu, okanye ngogonyo, olunokwenza umphumo omuhle wokuhombisa ikhitshi, indlu yangasese, ibhalkhoni njalo njalo.
Umgca we-extrusion ohamba ngezantsi:
SJSZ Series etsobhileyo Twin Screw extruder → Die ngumngundo → Umshini Calibration Itafile → Ukutsala-offs kunye Cutting Matshini Unite → Stacker → Control ikhabhinethi (Qaphela: Okunye Machine Auxiliary, ezifana isityumzi, Umxhubi, ziya kubonelelwa ngokweemfuno zabathengi)
Iimpawu zePVC trunking:
I-PVC trunking ineempawu zokugquma, ukuthintela i-arc, ukudodobalisa idangatye kunye nokuzicima.
Indima yePvunk trunking:
I-PVC trunking isetyenziselwa ikakhulu ukufakelwa izixhobo zombane ngaphakathi. Kwizixhobo zombane ze-1200V nangaphantsi, idlala indima yokhuselo lomatshini kunye nokhuseleko lombane kwiingcingo ezibekwe kuyo. Emva kokusebenzisa i-PVC trunking, i-wiring ilungile, i-wiring icocekile, ufakelo lunokuthenjwa, kwaye kulula ukufumana, ukulungisa kunye nokutshintsha imigca.
Zininzi iindidi kunye neenkcazo ze-PVC trunking. Ngokweemodeli, kukho:
Uthotho lwe-PVC-20, uthotho lwe-PVC-25, uthotho lwe-PVC-25F, uthotho lwe-PVC-30, uthotho lwe-PVC-40, uthotho lwe-PVC-40Q, njl.
20mm * 12mm, 25mm * 12.5mm, 25mm * 25mm, 30mm * 15mm, 40mm * 20mm, njl
Egqithileyo Umgangatho wokuveliswa kwepaneli yodonga kunye nodonga
Okulandelayo: Umgca Ukupakisha ibhanti extrusion PP